राष्ट्र संघको भावनाअनुसार अगाडि बढ्छौं : प्रधानमन्त्री ओली | Everest Times UK
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली जनताका लागि मानवतालाई पूर्णता दिने खाना, नाना र छानायुक्त प्रजातन्त्र आवश्यक भएको बताएका छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको ७३औँ अधिवेशनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै अमेरिका आएका प्रधानमन्त्री ओलीले महासभाको समाचार सङ्कलन गर्न आफूसँग आएका सरकारी स्वामित्वका र निजी क्षेत्रका पत्रकार तथा अमेरिकामै क्रियाशील पत्रकारलाई संयुक्त रूपमा दिएको अन्तर्वार्तामा एउटा मानिस सम्पूर्ण मानिस हुनुपर्ने र जसले मानवलाई पूर्णता दिनसक्छ त्यही नै पूर्ण प्रजातन्त्र भएको स्पष्ट गरे । ‘हामीसँग प्रजातन्त्र छ तर खाना छैन भने प्रजातन्त्र काम लाग्दैन’, एक प्रश्नको उत्तरमा उनले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले असोज ११ गते महासभालाई सम्बोधन गरे । उनले अघिल्लोपटक र यसपटक अमेरिका भ्रमण गर्दाको नेपालको अवस्था निकै फरक रहेको बताउँदै नेपाली जनताले प्राप्त गरेको उपलब्धिका विषयमा विश्वलाई जानकारी दिने र नेपाली जनताको प्रगतिमा उनीहरूको सहयोग जुटाउने आफ्नो भ्रमणको उद्देश्य रहेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुरेन्द्रबहादुर नेपालीले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :
यसपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा आउँदा कस्तो अनुभव भइरहेको छ ?
विघटित संसद् पुन:स्थापना भएको थियो । संसद्ले आफ्नो अधिकार सबल ढङ्गले प्रयोग गरेको थियो । राजतन्त्रका अधिकारलाई समाप्त पारी संवैधानिक हैसियतमा राखिएको थियो । पुन:स्थापित संसद्ले राजसंस्थाका सम्पूर्ण अधिकार आफूमा राखेको थियो । राजतन्त्र जीवित थियो तर राष्ट्रप्रमुखको हैसियत नरहेपछि राजतन्त्र भ्रमका रूपमा थियो । त्यसलाई पुन: बिउँतिन नदिन विधिवत् अन्त्य गर्नुपर्ने थियो । राज्यको पुन:संरचनासम्बन्धी प्रश्न, शान्ति प्रक्रिया र बृहत् शान्ति सम्झौता टुङ्गो लागेका थिएनन् । युद्धविरामसम्म भएको थियो र पुन:स्थापित संसद्लाई पुन:गठन गर्ने कुरा चलिरहेको थियो । सङ्क्रमणमा प्रवेश गरेको तर टुङ्गो लागेको थिएन र जनता शक्तिशाली हुने संविधान बन्ने अपेक्षा थियो । मानिसमा जिज्ञासा थियो, ‘माओवादीले हतियार बिसाएको छ अब के हुन्छ ?’ यी प्रश्नको जवाफ नआएको अस्थिर अवस्था थियो ।
माओवादी सम्पूर्ण रूपमा हतियार बिसाएर शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक धारमा हिँडेको छ । लडाकु व्यवस्थापन गरी सरकारमा आएको छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले लोकतान्त्रिक बाटामा हिँडिरहेको पुरानो पार्टी नेकपा एमालेसँग एकता गरी एकीकरण भएको छ । आमूल परिवर्तनको अवस्था छ । भिन्न परिवेशमा भिन्न अनुभव गरेको छु । आफैंले सञ्चालन गरेको र आपैंmले नेतृत्व दिएको शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिएर आएको असाधारण उपलब्धि र अनुभव साझेदारी गर्ने अवसर पाउँदा बेग्लै अनुभव हुन्छ । अगाडि बढ्ने आशा र विश्वास हुन्छ ।
मैले स्वीट्जरल्यान्डका राष्ट्रपतिसँग भेट गरेँ । बेलायतका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेँ । क्यानडाका प्रधानमन्त्रीसँग द्विपक्षीय भेट गरेँ । भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजसँग भेट गरेँ । औपचारिक वा अनौपचारिक ढुङ्गले भेटघाट भइरहेका छन् ।
महासभालाई सम्बोधन गर्दा के सन्देश दिनुभयो ?
नेपालले उपलब्धि हासिल गरेका कुरालाई प्रस्तुत गरेँ । नेपालमा शान्ति स्थापना भएको र अब विश्वशान्ति, बन्धुत्व, सहकार्य, पारस्परिक सहकार्यको पक्षमा रहेको कुरा उल्लेख गरेँ । गरिबी, भोकमरी र अशिक्षा नभएको मानव समाजलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार बनेको छ । यस कारणले समृद्धिभन्दा समस्यातर्फ जाने अवस्था नहोस् भन्नेमा हामी सचेत छौं ।
हाम्रो मित्रता सबैसँग छ शत्रुता कसैसँग छैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकका रूपमा काम गरिनेछ, पारस्परिक सम्बन्ध, मित्रता र सहकार्यलाई अगाडि बढाइनेछ । हामीले ल्याएको प्रजातन्त्रप्रति हामी दृढ छौं र बलियो बनाउन सजग छौं । हाम्रो आधार ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ हो । पूर्ण प्रजातन्त्र त्यो हो जसले मानवलाई पूर्णता दिनसक्छ, राजनीतिक अधिकारको नाराका रूपमा मात्र होइन । हामी आप्mनो प्रयासलाई अगाडि बढाउने अरू मित्रलाई त्यसैमा लगाउने प्रयासमा छौं ।
सहयोग, लगानी र ऋण आफ्ना आवश्यकताका आधारित भएर स्वीकार गर्ने कुरा हुन् । हामी सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मामिला न्यायोचित र जायज ढङ्गले चलाउन चाहन्छौं, अनुचित शर्तमा होइन । हामी देश, जनता र सम्पूर्ण मानवताका लागि काम गर्न चाहन्छौं । सम्पूर्ण प्रयास लोकतान्त्रिक बाटाबाट जनताको सहभागिता र संलग्नतामा सम्पन्न गरिनेछ । राष्ट्र निर्माणको अभियानमा अगाडि बढ्न, आर्थिक उन्नतिको अभियान चलाउन, सुशासन र स्वच्छता कायम गर्न तथा समृद्धि हासिल गर्न पनि अरू मित्रको सहयोग चाहिन्छ । राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा हामी स्पष्ट छौँ र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको भावनाअनुसार अगाडि बढ्छौं ।
हाम्रो समाज खाली प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक अधिकार वा अरू प्रकारका स्वतन्त्रताको हकमा सीमित हुनुहुँदैन । जनताको जीवनमा सम्पूर्णतामा परिवर्तन हुनुपर्छ । एउट मानिस सम्पूर्ण मानिस हुनुपर्छ । एउटा परिवार मात्रै सम्पूर्ण परिवार हुन सक्दैन, सम्पूर्णता सम्पूर्ण क्षेत्रमा हुनुपर्छ ।
समाजको सम्पूर्णता र समृद्धि सम्पूर्ण क्षेत्रमा हुनुपर्छ । हामीसँग प्रजातन्त्र छ तर खाना छैन भने प्रजातन्त्र काम लाग्दैन । हामीलाई खाना, नाना र छानासहितको प्रजातन्त्र चाहिन्छ । सबै कुरा भएको प्रजातन्त्र हामीलाई चाहिन्छ । महासभाका अध्यक्षका प्राथमिकताका बुँदामा यी धेरै कुरा स्पष्ट भएको छ ।